जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ ! – Jagaran Nepal
यो पनि , एजेन्सी । भाविन तुरकिया र उनका भाइले शून्यबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले अर्बौँ डलरमा परिणत भइसकेको छ । यसमा भाविनले आफ्नो सफलताको पूर्ण श्रेय पिताको एउटा सुझावलाई दिएका छन् र दाजुभाइ दुवैले बाल्यकालदेखि नै त्यही सन्देश शरण गर्दै आएको समेत उनले बताए । फोब्र्सका अनुसार भाइ दिभ्यांक सहित उनको कूल सम्पति १.३ अर्ब डलर बराबरको रहेको छ । उनले १९९८ मा १८ वर्षको उमेरमा २५ हजारको लगानीमा आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए ।
उनले १० वर्षको उमेरदेखि नै ‘कोडिङ’ गर्न सुरु गरेका थिए । उनका पिताले समर्थनका रुपमा उनलाई कोडिङ र कम्प्युटरकै विषयमा धेरै किताबहरु ल्याइदिने गरेका थिए । उनी भन्छन्, “ मलाई कम्प्युटरसँग पहिलो नजरमै प्रेम भएको थियो । म त्यतिबेला आफ्नो सबै समय कम्प्युटर कोठामै बिताउने गर्दथेँ । हामी घरमा कम्प्युटर किन्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । ” यसरी स्कुल पढ्दापढ्दै उनले आफ्नो पहिलो सफ्टवेयर स्थापित गरेका हुन् । उनले थप भनेका छन्, “मलाई सधैँ लाग्छ कि उद्यमी हुनका लागि केबल कल्पना नै पर्याप्त छ । किनकी यसले नै मलाई एउटा भिन्दै क्षेत्र र व्यवसायबारे नयाँ ‘आइडिया’ दिँदै आएको छ जस सम्बन्धी मलाई केही पूर्वज्ञान हुँदैन ।
त्यसैले मैले अहिलेसम्म पनि भित्री रुपमा ‘म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु । ” यसरी उनले आफैँले स्थापित गरेका कम्पनी विक्री गरि एक अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गरेका हुन् । आज उनी दुई ठूला सफ्टवेयर कम्पनीका सफल कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनले फेरि पनि दोहोर्याउँदै भने ‘फन्डामेन्टल ल अफ फिजिक्स’ नतोडिने जस्तोसुकै कुरा हासिल गर्न सम्भव छ ।” यो लेख तपाईंलाइ कस्तो लाग्यो, कृपया हामी जान्न चाहान्छौ, तेसैले एक लाइक ,शेयर कमेन्ट अबस्य गर्नुहोला। साथै नियमित समाचार र मनोरञ्जनका लागि पेज लाइक गर्न नभुल्नु होला।